Kwenqwaba yabantu ukukhokha ezitolo kanye kokuthola imali, alazi mayelana ingcebo kangangokuthi sidlula izandla zabo, becabanga ukuthi nje umoya.
Mint eminyakeni ezahlukene ukukhiqiza ethile imali Inani okuzisholo ruble 10 kopecks-10, futhi ngezinye izikhathi ezinye izinkulumo incane kangangokuba (kwaba nezigameko ukukhululwa zonke uhlamvu lwemali efanayo), ukuthi value abo balinganiselwa ku amakhulu ezinkulungwane ruble.
Izinhlobonhlobo zemali esiyisikhumbuzo
zemali Russian wawela par kusuka 10 kopecks ruble 25, kanye inani lamakhophi ikhishwe.
Imali senziwa izinto eziningi ezinkulu, okuyinto atholakala kuwo wonke kwemali, abanalo umehluko kanye izitembu iphethini efanayo, kodwa emuva kukhona zemali esiyisikhumbuzo 2 ruble nezinye naminala ukuthi zehluke iphethini evamile. Umehluko omkhulu kungabonwa ohlangothini emuva, lapho esikhundleni "ukhozi" ibekwe umfanekiso sikhunjulwe edolobheni, umuntu noma umcimbi.
Zemali, ekhiqizwa ngesikhathi izinsuku ezibalulekile, imicimbi noma abantu ngokuyisisekelo babe okusobala, okuyinto kuyabonakala kalula, kodwa kwezinye izimo umehluko akungqubuzani ngokucace kangaka nabantu abavamile ukushalazela amaphutha angasho ezibizayo uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo ruble 2, enikeza tibalo fabulous imali ezandleni ezingalungile.
Kungani ukukhulula zemali esiyisikhumbuzo
Njengoba ingxenye enkulu yomsebenzi imali ekhishiwe ihlelo elincane ezinenani elincane kusukela iphuzu zezimali umbono, yonke ukubaluleka kuphela ukukhumbuza abantu ezweni Russia - ezweni elikhulu ngempela ukuthi uye wathuthuka omkhulu, ukukhombisa izwe ngamandla alo.
Kusukela ngo-1997 Mint Russian ezikhishwe izinto ezingaphezu kuka-500, kuhlanganise zemali akuzona ushintsho oluncane ngesimo ukuqopha, futhi imidwebo ezinkulu yokudumisa izenzakalo ezijabulisayo.
zemali eziyivelakancane ezithakazelisayo okungaka kuwufanele njengoba iphethini kuboniswe kubo elenziwe hhayi kuphela ngesimo kwakunemibhalo eqoshiwe futhi isithombe okwamanje noma umuntu ogama udumo imali ikhishwe.
uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo 2 ruble 2000 model ngonyaka
Ngo-2000, inani ngokulinganisa of imali 2 ruble uchungechunge esiyisikhumbuzo wakhulula eMoscow Petersburg mints, kodwa ngamunye wabo eyingoduso nasekuqiniseni uchungechunge ngamunye, ngaphambilini kuye.
Petersburg Mint ukhiphe uhlu elandelayo: uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo ruble 2, anikezelwe Leningrad, kwaseStalingrad futhi Novorossiysk. enkantolo yaseMoscow icala ruble 2 ukubukwa ka Tula, Murmansk, eMoscow Smolensk.
imali Esibalulekile ngo-2000 enziwa yokudumisa iqhawe-emadolobheni, kanye nomklamo ukusebenza ngo ngendlela yokuthi zemali kukhona imicimbi wanyathela nezikhathi baye bavumela edolobheni ukuba abe iqhawe.
Ngokwesibonelo, kwaseStalingrad usezuze okukhulu ukubaluleka sibonga dudula ibutho lamaNazi futhi ngaleyo ndlela basithole edolobheni igama iqhawe, kanye Mint waqamba ruble 2 umfanekiso impi ngokumelene okwenza we izakhiwo ubhujiswe.
Kuphela 2-ruble uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo wakhishwa ukwabelana 10 million, kanye nosuku kokukhululwa - Meyi 4. Kodwa-ke, libhalwe inombolo amakhophi ngosuku olulodwa akunakwenzeka, futhi ukuqeqeshwa waqala kusengaphambili.
Izindleko zemali esiyisikhumbuzo ngo-2000
Inani noma iyiphi inguqulo uhlamvu lwemali iminyaka engu-kuxhomeke ezicini eziningi, kodwa into ebaluleke kakhulu - ke kuba yindaba kwegazi. Nokho, kulesi simo, kuba nomphumela intengo 2 ruble 2000 ungaba kungekho kwegazi, futhi esimweni zemali. Labo izimo ezingajwayelekile ukuthola emuva, hhayi kakhulu of interest abaqoqi ngenxa yokuguga yabo. Nokho, uma othile obekwe esiyisikhumbuzo uhlamvu lwemali Russia ruble 2 sesimweni esihle, ungakwazi ukuzidayisa ngentengo ruble 100 kuya ku-150.
Endabeni ruble 2 babe kunekwehluleka, ezifana imihuzuko ke ukuwudayisa kungasizuzisa numismatist obelokhu ngifuna ayebhekene naleso simo futhi ungakwazi ukulithola. Khona-ke uhlamvu lwemali uzoqaphela izindleko ziyancipha - 3-5 izikhathi.
Iqiniso kuphela elingakwazi bajabule nalabo abagcina uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo ruble 2, yisikhathi luyokwandisa ukubaluleka Ngokwesibonelo ngamunye izikhathi eziningana, futhi izizukulwane zethu ngesikhathi imali uzokwazi ukuthengisa ngemali sasivumela eningi.
uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo 2 ruble 2012
Enye nqwaba imali esiyisikhumbuzo wadedelwa ngo 2012 futhi iqondiswa izimali babe ukwenziwa zemali ezindabeni ezempi.
uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo 2 ruble 2012 eyakhishwa ngo izinguqulo 16 ezahlukene:
Field Marshal Barclay de Tolly.
Abasebenzi likakaputeni Durov.
Umhleli Kozhin abashokobezi.
Jikelele Alexander 1.
zemali esiyisikhumbuzo salolu chungechunge ohlangothini emuva abe portrait okucacile jikelele noma elinye jikelele, kanye umbhalo oqoshwe ngokuqoshwa igama lakhe ukuqwashisa.
Izindleko uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo 2012 ukukhululwa
Naminala imali encane, eyakhululwa ngo-2012, abazange babe ungowenani elikhulu. Thengisa uhlamvu ngoba umvuzo omkhulu engasebenzi. Nokho, uma kukhona isifiso esikhulu ukuqaphela uhlamvu esiyisikhumbuzo, kufanele kuqala uqiniseke ukuthi zisesimweni ephelele.
Numismatist, bavumelana ukuthenga Esimweni esinjalo, kuyothiwa ngokucophelela kubhekwe ukuze bathole uhlamvu ephelele, njengenjwayelo (bagibele) namuhla zemali zisengaphansi kwegazi futhi isivele kakhulu bakhathale.
Izindleko inguqulo ekahle zemali esiyisikhumbuzo ngo-2012 wonke 30, plus noma lokususa ruble 10, kodwa lokho kumane nje endabeni esimweni salo acwebile, futhi uma kukhona ukugqoka, kubalulekile ukulinda izikhathi ezingcono.
Dvuhrublevye Gagarin zemali
Noma yisiphi isakhamuzi yezwe uyaziqhenya (izikhathi ke WaseSoviet) Russian wawudlula United States emncintiswaneni Isikhala yaba izwe lokuqala ukuthumela indoda emkhathini. Yokudumisa usuku lokukhumbula lesi senzakalo elibalulekile lalo lonke izwe futhi zonke izakhamuzi ngabanye mints wayala ukukhulula uchungechunge entsha zemali ngesithombe hero, ekujikelezeni kwazo kwaba amayunithi kwezigidi ezingu-20.
Nokho, ngenxa inani elikhulu zemali ekhishwe, ngamunye wabo eyingozi, umzuzwana omkhulu lomcimbi uyakufakazela ukubaluleka esimele uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo 2 Gagarin Rouble hhayi kuphela uhlamvu, kodwa futhi ngoba abathengi abavamile.
IsiKhumbuzo uhlamvu lwemali astronaut lokuqala libukeka abavamile 2 ruble, kodwa uma uvula upside phansi (ukhozi), singabona ukuthi kukhona wanyathela isithombe Gagarin ku isizinda izinkanyezi ephakeme, usuku ezibaziweyo Apreli 12, 61 isibonakaliso esikhulu umshayeli.
Price idatha uhla zemali siyahluka kakhulu ngenxa yokuthi zonke isamba semali esele wadibaniswa Petersburg naseMoscow mints. Nokho, kwezinye izimo lumane isignesha umkhiqizi, futhi izindleko kuhluka 800 kuya kwezingu-3 ruble.
uhlamvu lwemali esiyisikhumbuzo kusukela izinsimbi eziyigugu
Ngezikhathi ishicilela zemali ezehlukene esiyisikhumbuzo, okuyinto wanyathela kwimemori izenzakalo futhi kubantu abaye baba neqhaza imicimbi, kodwa akukho amakhophi nje elinganiselwe namayunithi ekhishwe amatshe ayigugu.
Ngokwemvelo, ukulinganiselwa uchungechunge olunjalo kwenza numismatists uqale ekuzingeleni, kodwa abanikazi lwalezi zinhlamvu kukhona ekujaheni ukutshela konke mayelana ukutholakala kwakhe okumangalisayo, futhi ngokucophelela kufihle ulwazi. Noma kunjalo, zemali kwenziwa of amatshe ayigugu (zegolide nezesiliva) kulinganiselwa ku tibalo fabulous.
Igolide kanye nezinhlamvu zesiliva ochungechungeni elilinganiselwe ngempela inani elikhulu, kodwa izindleko zokuhlinzwa ikhophi 1 kungenzeka amashumi, futhi kwezinye izimo amakhulu ezinkulungwane ruble, othi lutho olubaluleke zezimali okunjalo futhi ayikuvumeli numismatists lula ukuze ikhulise iqoqo umfuziselo ezinjalo. Ngokwesibonelo: a Uhlamvu lwegolide ruble 50 ngo-2014, eyakhishwa ngo behlonipha M. Yu Lermontova, obiza ruble angaba yizinkulungwane 25, noma ama-ruble angu-100, eyakhululwa ngo-yokudumisa uzowanqoba amaNazi Battle of kwaseStalingrad, okwabangela inhlekelele ruble ayizigidi 108.. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi kukhona izingcezu ezimbalwa kuphela.
Zikhona nezinye izibonelo eziningi emihle imali naminal 5, 10, ruble angu-50, kodwa intengo into akwazi ukuxoxa abangaphezu kwesigidi. Ngokwesibonelo, ama-ruble angu 1,000 hlamvu lwemali behlonipha umlando yemali, kuwufanele ruble ayizigidi ezingu 1.55.
Indlela sokulungiselela enkulisa iziqu iskripthi futhi zokubhukuda
On isicelo "piracetam" imfundiso. ulwazi oluyisisekelo
Ukhathele konke. Ngifuna ukuphumula ...
I self-wamemezela kwatholakala ukuthi unesifo - induna phezu kwesifuba
Indlela ukupheka isaladi emangalisayo esihlwabusayo "uKhesari" nge nezimfanzi
Laminate 33 ekilasini: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, imibono, nabathengisi
Smartphone "Lenovo A319": Izibuyekezo wabanikazi futhi intengo
Intela Road eBelarus. Usayizi intela umgwaqo Belarus
Writs yokusungula - ebalulekile ukulawula inhlangano